Onshore Production-Onshore Production-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valizy no marika)
Fotoana: 2020-10-09 Hits: 41
Titan API 6D sy API 6A valves dia be mpampiasa amin'ny tsenan'ny solika sy ny entona. Ny lavadrano misy solika dia ekena amin'ny isa avo lenta izay hatramin'ny 20,000 2psi sy ny haavon'ny H2S ary ny COXNUMX izay ampiarahina amin'ny poti-panafana sy fasika avo avy eo ny filan'ny vokatra avo lenta sy mafy orina.
Ny fampitomboana ny asa amin'ny fitrandrahana entona shale miaraka amin'ny teknikan'ny famokarana solika mihombo miaraka amin'ny fampiharana simika simika sy rano. Ny valva sy ny fitaovana fanaraha-maso dia mila manohana ny fiakaran'ny toetr'andro sy ny fikaohon-tany mandritra ny fikarohana.
Noho ny fomba famolavolana be pitsiny an'i Titan valizy, ny fisafidianana fitaovana marina, ny fomban'ny zavakanto sy ny teknolojia famafazana mafy, ny valiny Titan dia manolotra vahaolana vaovao ho an'ny serivisy mitaky.
Ny valva Titan dia napetraka ao anaty toe-javatra mafy toy ny tany efitra, ny toetr'andro sy ny toetr'andro.